Igumbi leeNkwenkwezi ezintlanu elinobunewunewu kunye nokulungiswa komgangatho waseYurophu
✔ Five Stars-Kostanay Guest Apartment iya kuhlala ukuya kwiindwendwe ezintandathu ngokukhululekileyo kwaye ekhaya kangangoko kunokwenzeka. Ukuhlala kwigumbi kuya kushiya eyona nto imnandi kuye wonke umntu: abakhenkethi abahambahambayo, iintsapho ezinkulu ezinobuhlobo, abahambi beshishini.
✔ Igumbi lokulala elahlukileyo elizolileyo linebhedi ephindwe kabini enomandlalo wamathambo. Ukwenzela umoya wokomoya kunye nokufunda okumnandi ngaphambi kokuba ulale, izibane ezintle ziya kusebenza kwiitafile ezisecaleni kwebhedi. Izinto zinokufakwa kwigunjana eliphangaleleyo.
✔ Kwigumbi lokuhlala elikhanyayo elinelanga elikhanyayo kukho isofa egobileyo egobileyo kunye nezitulo ezibini ezilula. I-TV enkulu ye-LCD iya kubonelela ngokonwabisa. Ukuzola ngakumbi kunye nentuthuzelo, ikhaphethi kunye netafile yekofu zinikezelwe. Iinkcukacha eziqaqambileyo zangaphakathi zikholisa iliso.
✔ Igumbi lesithathu - istudiyo esinemibala, esahlulwe ekhitshini yindawo yokutyela - sikwaxhotyiswe ngebhedi yesofa ephindwe kabini kwaye inokusebenza njengendawo yokulala epheleleyo yeendwendwe ezimbini. Ingaphakathi eliqaqambileyo legumbi lokutyela libeka umoya osekhaya ngokwenene. Iindwendwe zinikwa isidlo esimnandi kunye nokusela iti. Kukho ne plasma enkulu apha edongeni. Iseti yekhitshi enesitayile ixhotyiswe ngazo zonke izixhobo zasekhaya eziyimfuneko ukuze kuhlale ixesha elide. Kukho isethi epheleleyo yezitya ezahlukeneyo kunye nempahla yasekhitshini kwiindwendwe ezintandathu zendlu.
✔ Igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa lixhotyiswe ngempahla yococeko emhlophe qhwa, umatshini wokuvasa kunye nezinye izixhobo zokunyamekela iindwendwe.
Yintoni EKUFUTSHANE: Ngokuchasene nendlu yimakethi encinci yaseAsia, ivenkile ye-15, indawo yokulungisa iinwele, indawo yokumisa ibhasi, iofisi yokutshintshiselana ngemali. Endlini kukho ivenkile yeFix Price, ivenkile yempahla.
Ngalo lonke ixesha lokuhlala, sinxibelelana kwaye sincede iindwendwe.